ဝိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ၀ိ	22
Posted by •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ on Aug 19, 2015 in Creative Writing | 22 comments
၀မရှိပဲ ၀ိလုပ်သည် ဟူသည့်စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို လူတိုင်းနီးပါးသိကြပေလိမ့်မည်။
မိမိအိမ်မှာ စားဖို့ပင်ခက်ခဲနေသည့်ကြားက အ၀တ်အစားအကောင်းစားတို့ကိုဝယ်ဝတ်လျက်
မိတ်ဆွေ၊အပေါင်းအသင်းတို့အလယ် ကြွားဝါ၀တ်ဆင် ဟန်ရေးလုပ်သူကဲ့သို့သောသူများကို ဆိုလိုသည်။
၀ိလုပ်ချင်ချင်းဟူသည် ရောဂါတစ်ရပ်ဟုဆိုရာတွင်မမှား။၀ိလုပ်ချင်သည့်ရောဂါကို စတင်မိပြီဟု သိသည့် အချိန်တွင် ပျောက်အောင်
ကုရင်ကု ထိုသို့မဟုတ်ပဲဝိလုပ်ချင်စိတ်၌သာယာလျက် ၀ိလုပ်မြဲလုပ်နေပါက နာတာရှည်ရောဂါတစ်ခုပမာဖြစ်သွားနိုင်ပေသည်။
လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် မူလတန်းအရွယ်မှစ၍ အရွယ်ရောက်ပြီးသည့်ကာလအထိ မိမိတို့နှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံသည့်
မိတ်ဆွေတို့ကိုရွေးချယ်ရာ်၌ ငွေကြေးချမ်းသာသည့် လူကုံတန်တို့ကို
အထင်ကြီးအားကျကာပေါင်းသင်းလိုကြ ရွေးချယ်ချင်ကြသည်။ ငွေကြေးချမ်းသာသူတို့နှင့် ပေါင်းသင်းလို
စိတ်ဖြစ်သူတို့တွင်အတွင်းစိတ်သဘောမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါင်းသင်း လိုကြခြင်းးဖြစ်သည်။
တစ်ချို့သောသူတို့က ငွေကြေးချမ်းသာသူတို့ထံမှ စားရနိုး၊သောက်ရနိုး၊စွန့်ကြဲပေးကမ်းမှုကိုခံယူရ
လိမ့်နိုးဟူသည့်စိတ်နှင့်ပေါင်းသင်းလိုကြသလို၊တစ်ချို့သောသူတို့ကတော့ ဘာစွန့်ကြဲပေးကမ်းမှုကို မှ
တမင်တကာမျှော်ကိုးတာမျိုးမရှိပဲ ငွေကြေးချမ်းသာသူတို့နှင့် ပေါင်းသင်းနေရသောကြောင့် မိမိကိုယ်တိုင်လည်း
လူကုံတန်တစ်ယောက်ပမာ ဖြစ်နေသလို အထင်ရောက်လျက် မိမိပတ်ဝန်း ကျင်က မိမိကို အထင်ကြီးနေကြမှာပဲ ဆိုပြီး
ကိုယ့်စိတ်ထဲကိုယ်အထင်မှတ်လျက် ပေါင်းသင်းချင် ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့သောသူများသည် မိမိရဲ့တကယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းအစစ်အမှန်နှင့် ဝေးကွာသည်ထက်ဝေးကွာ လ်ာကြသလို
မိမိအသိုင်းအ၀ိုင်းသည် မိမိနှင့်မအပ်စပ်ဟုစိတ်ကြီးဝင်ကာ် မိမိအသိုင်းအ၀ိုင်းကို အထင်သေးလျက်
ငွေကြေးချမ်းသာသူတို့နှင့်ပေါင်းသင်းလိုသူများတွင် တစ်ချို့ အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းကောင်းဖြစ်ထွန်း ပေမည်။သို့ရာတွင်
အများစုမှာတော့ ငွေကြေးချမ်းသာသူတို့ကို အထင်ကြီး၊အားကျ၊တုပလိုစိတ် တွေဖြစ်ထွန်းနေတာကြောင့်
မိမိစိတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ၀မရှိပဲဝိ စလုပ်ဖြစ်ကြတော့သည်။
(၁)အိမ်ဝယ်၍ လိုင်းကားစီးမည်။(၂)အိမ်ငှားနေ၍ ကားဝယ်စီးမည်။
နံပါတ် (၁)ကို ရွေးချယ်မည့်သူသည် မိမိအပေါ်လူအထင်ကြီးခံရဖို့ မခံရဖို့ထက်၊မိမိဘ၀အာမခံချက် ရှိဖို့အရေး
ကြိုတွေးပူကာဆုံးဖြတ်သူဖြစ်လျက် ထိုလူအတွက် သွားရေးလာရေ်း်၌ထင်သလောက် လိုရာမရောက်သော်ငြား အပင်ပမ်းခံရမည်.
နံပါတ်(၁)ကိုရွေးချယ်သူတို့သည် ၀ ကိုစရေးသူတို့ဖြစ်ကြသည်။နံပါတ်(၁)ကို ရွေးချယ်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာမည့်အကျိုး ကျေးဇူးတွေမှာ
အဓိကကျတဲ့အကျိုးတွေက အိမ်ငှားခသက်သာမည်၊မိမိအိုးနှင့်တန်သည့်အဆံသာ ထည့်ရမည်မို့ ကားဝယ်စီးခြင်းကြောင့်
ကုန်ကျရမည့် လောင်စာဆီဖို့၊တခြားဗာရီယဖိးု့ သက်သာမည်။မိမိသည်ပိုလျှံသူတစ်ယောက်မဟုတ် သေးသည့်အတွက်
မိမိသွားလာရေးအတွက် ဇိမ်မခံသင့်သေးဟု ခံယူချက်ရှိနေပေလိမ့်မည်။
နံပါတ်(၂)ကို ရွေးချယ်သူတို့သည် အထက်ကပြောချင်သည့်အကြောင်းအရာရဲ့ဇာတ်ကောင်
၀ိလုပ်ချင်သူတို့ဖြစ်လျက် ရွေးချယ်ခြင်းကြောင့် ရလာမည့်အကျိုးအမြတ်တို့သည်နံပါတ်(၁)မှာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
အိမ်ငှားခကုန်ရမည်၊လောင်စာဆီနဲ့ကားဗာရီယဖိုးရှာရမည်။ထို့အပြင် မိမိသည် ဟန်တစ်လုံး ပန် တစ်လုံးနှင့်
ထည်ထည်ဝါ၀ါနေနေကြဖြစ်တာကြောင့် တစ်ပါးသူများကလည်း မိမိကို ငွေကြေးချမ်း သာသူဟု
အထင်ရောက်ကြလိမ့်မည်။ထိုသူတို့အထင်ရောက်ခြင်းအပေါ် သာယာနေပေလိမ့်မည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်
ထိုသူတို့အထင်ရောက်ခြင်းမှ ပြောင်းပြန်အထင်ရောက်မှုများမိမိအပေါ်ကျ ရောက်မည့်အရေးသည် မိမိအတွက်
တစ်ပါးသူတို့ရဲ့အထင်အတိုင်းဆက်လက်ရှိနေစေရန် အမြဲလိုလို ၀ိလုပ်နေရပေမည်။၀ိလုပ်နိုင်ဖို့
မိမိခေါင်းထဲဝင်လာပေတော့မည်။ထိုမှသည် ၀ဆိုတဲ့ အခံမရှိပါပဲ လုံကြီးတင် တင်ချင်သူတို့အတွက်
တစ်ချို့လူတွေကိုတော့ ချွင်းချက်အနေနှင့်ပြောရပေမည်။မိမိတွင် ကားဝယ်ရန်လုံလောက်သော် လည်း အိမ်ဝယ်ရန်မှာ
မိမိအလုပ်အကိုင်နှင့်ဝေးကွာသောအရပ်တွင်သာတတ်နိုင်မည်။မိမိ ရာထူး၊ဂုဏ်သရေနှင့် မဖြစ်မနေ
ထိုသို့သော လူကြီးလူကောင်းတို့တွင် တစ်ချို့်၌ ၀ိလုပ်ချင်စိတ်အလျဉ်းမရှိပါ ဆိုသော်ငြား လူလေးစားအထင်ကြီးစေချင်စိတ်လေးတော့
ဟူ၍မရှိ။မိမိရဲ့ပညာရာထူး၊ဂုဏ်ရှိန်၊အလုပ်အကိုင်ကြောင့်ရလာမည့်ငွေကြေးပမာဏ တွက်ချက်ပြီးနှင့်သူ တို့အနေနှင့်တော့
၀မရှိသေးပဲလဲ ၀ိလုပ်ထားသင့်ရင် လုပ်ထားနိုင်ပေသည်။
ထိုသို့သောလူမျိုးတွေမှာတော့ ၀ိလုပ်ချင်စိတ်ထက် နောင်ရေးအဆင်ပြေစေဖို့ ရွေးချယ်သူ၊ခန့်မှန်းတွက်ချက်တတ်
သို့ရာတွင် ယနေလူတို့သည် အထူးသဖြင့် မြို့ပြလူနေမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းရှိလှူုအများစုတို့သည် လတ်တလော
အမိုးနဲ့အကာကိုလှပစွာတန်ဆာဆင်လျက် ကြမ်းခင်းမရှိသောခြေတံရှည်အိမ်တွင် သင်ဘယ်လိုနေ
ဟိတ်ဟန်ကြီးလျက် အပေါ်ယံတန်ဆာဆင်သောသူတို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ခဏတာမျှသာ
အထင်ကြီးခြင်းကိုရလိမ့်မည်။ယင်းအမှုသည်လည်း ကောက်ရိုးမီးပမာ ခဏတာဟုန်းခနဲနှင့် ငြိမ်းချိန်တန်ကျ ပြာဖြစ်ရပေမည်။
လူကြီးတို့သည် မိမိတို့ ၀ိလုပ်ထားမှုကိုပြောင်းလဲရန် ရှက်ရွံ့ကြသည်။တစ်သက်လုံး ၀ိလုပ်လို့မရသည့်တိုင် ၀ိလုပ်မိသူတို့သည်
၀ိလုပ်နိုင်သရွေ့ဝိလုပ်ကြသည်။၀ိလုပ်ရင်းက တစ်ကယ်ဝိလုပ်နိုင်သည့်အခြေအနေအဖြစ်ရောက်ရှိကုန်သူတို့ ရှိကြပေမယ့်
သို့ဖြစ်ပါ၍ လူငယ်လေးတွေအနေနှင့် မိမိတို့ ဘ၀အစစ်အမှန်ကိုမရှက်မရွံ့ပဲ ၀ိလုပ်ချင်သည့် အနာရောဂါတစ်ရပ် မိမိထံမစွဲကပ်စေဖို့
လူငယ်တို့ဟူသည် အနာဂတ်ကိုများစွာပုံဖော်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးနဲ့အချိန်တွေပိုင်ဆိုင်နေသေး သည်။
မိမိဘ၀မှန်ကိုမပြတ်သတိပြုဆင်ခြင်ရင်းက တိုးတက်မှု လမ်းကိုကြိုးပမ်းလှမ်းကိုင်သင့်သည်။
ငါးကျပ်ရှိချိန် တစ်ဆယ်မသုံးမိအောင်၊အထူးသဖြင့် လူအထင်ကြီးစေရန်သက်သက်ဖြစ်သည့် ကိစ္စအသေးအမွှားလေးတွေကစ၍
တမင်တကာရည်ရွယ်၍ ၀ိရောဂါကိုအစမပျိုးမိစေရန်လို ပေသည်။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာလည်း လူချမ်းသာ၊လူလတ်တန်း၊လူဆင်းရဲ ဆိုသည့် အတန်းစားတွေ ထက်
အကျင့်စာရိတ္တမှန်ကန်သူနှင့်သာ အဆွေခင်ပွန်းကောင်းဖွဲ့ခြင်းဖြင့် ကြီးပွားတိုးတက်မှုအမှန် ကိုရောက်ရှိနိုင်ကြပါလေသတည်း။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အကျိုးရှိတဲ့ ပို့(စ) ဗျ။
သများ ဒီ လာခါနီးတော့ ဦးလေးက မှာလိုက်တာ။
ရုပ် ပြ ပစ်စည်းတွေ ရဲ့ ဖျားယောင်းမှုကို ကြံ့ကြံ့ခံရမတဲ့။
တကယ် မရှိမဖြစ်အသုံးမဝင်တဲ့ အရာတွေ မဝယ်ရဘူးး ဆိုတာ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်မှာလိုက်တယ်။
အဲလိုမှ မဟုတ်ရင် သူများ တိုင်းပြည်မှာ သူများလို မရှာနိုင်ပဲ သူများလို သုံးမိရင်ပျက်စီးခြင်း အစ လို့ ပြေါတယ်။
မြန်မာ သူငယ်ချင်းတွေ ကြားမှာ တော့ သူဘာသုံးတယ် ကိုယ်ဘာသုံးတယ် ကြည့်ကြပေမဲ့ တခြါး သူတွေကတော့ ဖာသိဖာသာပဲ။
တချို့ စိတ်တွေတော့ နားမလည်ဘူးးး
မသုံးရင်လည်း နှိမ် နဲ့ အတော် ရှုပ်တယ်။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: သများက​တော့ တကယ်​ကြွား​နေတာ​တွေ့လဲ ပြုံး​နေ​ပေးလိုက်​တယ်​။တကယ်​ကြွားသူနဲ့တကယ်​ရှိလို့ဝတ်​စားသုံးစွဲသူက ကြည့်​တာနဲ့ကွာပါတယ်​။ကြည့်​တာနဲ့ကွာပါတယ်​။
ကိုယ့်​သူငယ်​ချင်းတစ်​ချို့ ဝိ​နောက်​လိုက်​​နေကြလို့ စိတ်​မ​ကောင်းပဲ ​တွေး​ရေးမိတာ။အချစ်​ဆုံးသူငယ်​ချင်း​တွေဖြစ်​​နေ​တော့သူတို့ တကယ်​မဟုတ်​တာ အဟုတ်​လုပ်​​နေမှန်းသိ​တော့ ပျက်​ဆီးရာပျက်​ဆီး​ကြောင်းမလိုလားဘူး။​ပြောဖြို့လည်း မနာလိုဘူးထင်​မှာ​ကြောက်​​နေတာ။
black chaw says: ဟုတ်တယ်ဗျ…။
ကျွန်တော် ခတ်ငယ်ငယ် တုန်းက
၀ မရှိပဲ ၀ိ လုပ်ခဲ့တာတွေ အတော်များခဲ့ပါတယ်…။
အခု ကတော့ အရွယ်လည်း ရလာ…၊
အကြိမ်ကြိမ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ဖူးတာကလည်း အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်…၊
နည်းနည်း တော့ မြင်တတ်လာပါပြီဗျာ…။
ဒါတောင် အကြိမ်ကြိမ် ရှုံးနိမ့်နေရတုန်းပါဗျာ…။
ဦးဘလက် က အပေါ် အသင်း သိတ်အားပေးတတ်တဲ့ ကောင်ကိုး ဗျ…။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ငယ်​တုန်းအရွယ်​က အဲ့လိုပဲ​လေ။အားကျအထင်​ကြီးစိတ်​​တွေကအ​ခြေ ခံတာ​ပေါ့။အ​တွေ့အကြုံနဲ့ယှဉ်​ပြီးအငယ်​​တွေကို သတိ​ပေးရတာ​ပေါ့။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အဲတော့.. ယောက်ျားမယူရသေးဘဲ ခေးလိုချင်တာကိုလည်း ဝိ လို့ ခေါ်တယ် ဆိုပါတော့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့က အလှမ်းကျယ် အလယ်လတ်
kai says: ကလေးရသွားပြီးမှ.. ယောက်ျားယူတာမျိုးကျ… ၀ိဖြစ်ပြီးမှ.. ၀လှမ်းတာပေါ့နော… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: ကျန်း ကျန်း.. ဝိုင်းပြောကြတယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 526
ဂျက်စပဲရိုး says: မိဘ တွေက နယ်ဘက်က ဖြစ်ပြီးတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကြပ်တည်းခဲ့လို့ နေမယ်။
ကျနော်ငယ်ငယ်ထဲက တစ်ခုခု လိုချင်ပြီဆို ဘာအတွက် သုံးမှာလဲ ဘယ်လို အကျိုး ရှိမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ အရင် ဖြေရတယ်။
အဲ့ဒါတွေကို ကျေနပ်အောင် ရှင်းပြနိုင်မှ လိုချင်တာ ရတာ။း)
အခု ကြီးလာတော့ ကိုယ့်လစာ နဲ့ ကိုယ် ဖြစ်လာတော့ လိုချင်တာတွေ လိုက်လျှောက် ဝယ်မိတာများပြီး ငတ်ပဟဲ့ ဆိုရင် သတိပြန်ရတယ် ငါ မလိုတာတွေ ဝယ်ထားမိပါပကော ဆိုပြီးး)
Alinsett @ Maung Thura says: ဝိ လုပ်ချင်ပေမဲ့… ဝ ပျောက်လို့ လိုက်ရှာနေရသူ….
ဘယ်သူလဲဆိုတော့ ”ဝ” ပါပဲ…
တောင်ပေါ်သား says: ပေါ်တော်မူကြီးပါလား
ဝိ လုပ်ဖို့နေနေသာသာ ဝ တောင် ဘယ်ရှာရမယ် မသိ
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အမွန်​၊အလင်းဆက်​၊ဦးမျိုးတို့
ဝ ကို အရင်​ စဆွဲပါမှ လုံးကြီးတင်​အတွက်​အုတ်​မြစ်​ရမှာပါ။
မြစပဲရိုး says: ဒီမှာနေရတာ အဲဒီ ကြွားစ် ဒုက္ခငြိမ်းတယ်။
သူ့ဟာသူ ကိုယ့်ဟာကို ဂရုကို မစိုက်ကြတာ။
ဒါပေမဲ့ လူအချင်းချင်း အသားလွတ် နှိမ် ရင်တော့ ရှုံ့ချခံ ရလိမ့်မယ်။
သတိပေး ပို့စ် လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ မနန်းရေ။ :-))
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: မပြည့်​တဲ့အိုး​ဘောင်​ဘင်​ခတ်​ဆိုသလို။ပြည့်​စုံသူအများစု​နေတဲ့အရပ်​၊တကယ့်​ချမ်းသာချင်းအစစ်​ဆိုတာ ​တွေးတတ်​တဲ့အရပ်​နဲ့ဘယ်​ဟာကဂုဏ်​လုပ်​သင့်​တဲ့ကိစ္စဆိုတာသိတဲ့သူ​တွေ​နေတဲ့အရပ်​​တွေမှာ​တော့ဘယ်​ဟာက ကြွားသင့်​တဲ့အရာဆိုတာကွဲပြါး​နေကြပါလိမ့်​မ​ပေါ့အရီး​ရေ။
Ma Ma says: ၀ိလုပ်တယ်ဆိုတာလည်း ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာတာပါပဲ။
၀ ရှိလို့ ၀ိ လုပ်ရင်တောင် လုံးကြီးတင်ကို ထမ်းနေရတဲ့ ဒုက္ခရှိသေးတယ်။
၀ မရှိပဲ ၀ိ လုပ်ရင်တော့ လုံးကြီးတင်ပါပြုတ်ကျသွားလိမ့်မယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဟုတ်​ကဲ့ ဝဆိုတာပြည့်​စုံရုံနဲ့ ဝိလုပ်​ပြ​နေစရာမလိုပါ။ကိုယ်​ပိုင်​ဟန်​နဲ့သွားလာဝတ်​စား​နေထိုင်​မှုက ပုံမှန်​တဆင့်​ချင်းတက်​လာမှာပါပဲ။
Mike says: .ကျုပ်လည်းသဘောတူပါတယ်…
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ​​ကျေး​ကျေးပါ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: “ဘုရင် အစစ်မှာ မင်းမြောက်တန်ဆာငါးပါးမလိုဘူး”တဲ့
ဘုရင်မဟုတ်သူတွေသာ ဘုရင်လို့ ထင်အောင် မင်းမြောက်တန်ဆာငါးပါးကိုအားကိုးနေရတာပေါ့
၀မရှိဘဲ ၀ိလုပ်ချင်သူဆိုတာ ဒီအတိုင်းပါဘဲ
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: မှန်​ပါ့​လေး​ပေါက်​။အဓ်ိက​ပြောချင်​တာက ဝိ​နောက်​လိုက်​ရတာ ပင်​ပမ်း​ကြောင်းနဲ့ အရပ်​စကားအရဆို ​ကြွေးထူ၊ဖိုးတွမ်​တိဖြစ်​တဲ့အထိ ဆိုးကုန်​လှတတ်​တယ်​။
ဦးကျောက်ခဲ says:0(zero) မရှိပဲ 8 (eight) လုပ်ချင်လို့ဖြစ်မလား…
အလှမ်းကျယ် အလယ်လပ် ၊ မပြည့်တဲ့အိုး ဘောင်ဘင်ခတ်သတဲ့…
ဒါပေသည့် … ဟန်ကိုယ့်ဖို့ ၊ ဟောက်စား ဖိန့်ဖိန့်လေးလည်း ရှိဦးမှ… ဂတ်စ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အာ့​ကြောငအာ့​ကြောင်​အာ့​ကြောင့်​ချွင်းချက်​ကိုထည့်​​ရေးရတာ :D